Articles tagged 'telecel zimbabwe'
Telecel tackles Zim govt 25 September 2015 AMSTERDAM - Telecel Zimbabwe (Telecel)'s parent company, VimpelCom Limited, says it is preparing to file an international arbitration against government next month after it cancelled its mobile licence and contravened bilateral investment promotion and protection agreements (Bippas). Vimpe...
Reprieve for Telecel 9 May 2015 HARARE - High Court judge Nicholas Mathonsi has accused the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) of being overzealous in the manner in which it dealt with the cancellation of Telecel operating licence. Potraz last week gave Telecel, the country's third larges...
Telecel invests $3,3m in TeleCash 18 July 2014 HARARE - Telecel Zimbabwe (Zimbabwe) says it has invested at least $3,3 million in its mobile money service, Telecash, since inception in January this year. The telecoms firm — Zimbabwe’s second largest wireless network operator — said $2 million was spent on setting up the TeleCash platform. ...
Telecel forced to pay council bills 8 July 2014 BULAWAYO - Zimbabwe’s second largest mobile network operator by subscriber base, Telecel, has been forced to pay council bills for base stations erected on municipal land without authority. Telecel has about 60 base stations dotted around the city, with the majority of them operating illegall...
Telecel boss resigns 23 June 2014 HARARE - Telecel Zimbabwe (Telecel)’s chief commercial officer Ashraf Elguindy has resigned. His sudden resignation, in yet unclear circumstances, comes on the back of the group’s former chief executive Francis Mawindi’s controversial dismissal last year. “Mr Elguindy is no longer in the em...
Prosecute Mutasa, Supreme Court says 29 January 2014 HARARE - Zimbabwe's Supreme Court has ordered the Attorney General (AG) to allow Telecel Zimbabwe (Private) Limited (Telecel) to prosecute ex-company chairperson Jane Mutasa through private proceedings, it emerged yesterday. This comes as the High Court had dismissed Zimbabwe’s second largest ...